‘हैरान’को नयाँ गीत सार्वजनिक, गजित र निश्माको रोमान्स (भिडियो) – cafeguff
‘हैरान’को नयाँ गीत सार्वजनिक, गजित र निश्माको रोमान्स (भिडियो)
यही शुक्रबार अर्थात् जेठ ४ मा नेपाली फिल्म ‘हैरान’ फिल्म हैरानमा समावेश ’दाग छैन अब जुनमा पनि’ बोलको गीत रिलिज भएको छ । गीतमा चन्द्रमणि भट्टराईको शब्द, किरण कंडेलको संगीत र युबराज चौलागाई , इन्दिरा जोशी र अभिनेत्री निश्मा घिमिरेको स्वर रहेको छ । गजित विष्ट र निश्मा घिमिरेले गीतको फिचरिंग गरेका छन् !
गीतमा गम्भीर विष्टको कोरियोग्राफी रहेको छ । गीतमा निश्मा र गजित विष्ट फिचर्ड छन् । ‘फिल्म रिलिज हुदैछ , वार्ताको सफलतापछी एउटा आश थपिएको छ’ निर्माता तथा कलाकार गजित विष्टले बताए । फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलर, टिजर र गीतसंगीतको पाएको रेस्पोन्सले भने गजित उत्साहित छन् । ‘हाम्रो म्याटरलाई जसरि दर्शकले रुचाउनु भएको छ, यसले हामीलाई उत्साहित भने पक्कै बनाएको छ’ गजितले भने ।
विश्कै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टको निर्देशनमा तयार भएको फिल्मलाई कमेडी र एक्सन जनरमा तयार पारिएको छ । डेब्यु फिल्म ‘लभ यु बाबा’ मार्फत नै सौगात विश्वका कान्छा निर्देशक घोषित भएका थिए । यिनै सौगात दोस्रो फिल्म लिएर आएका छन् । अघिल्लो फिल्ममा बाबु छोरी बीचको प्रेमलाई देखाइएको थियो भने यसपटक सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
फिल्ममा सत्यराज आचार्य , गजित विष्ट , मोहमद वसिम राजा , सागर लम्साल, निश्मा घिमिरे , सरोज खनाल , बुद्धि तामाङ , पुष्कर रेग्मी , शिशिर भण्डारी, एन्जल राई , आरोही शर्मा लगायतको अभिनय रहेको छ । मोडलिङमा रमाउदै गरेकी आरोही यसै फिल्म मार्फत डेब्यु गर्दै्छिन ।
डान्स फेभरको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा मुक्ति घले , सृष्टि घिमिरे , डाक्टर वाई एल लामा निर्माता रहेका छन् भने सम्झना पोखरेल कार्यकारी निर्मात्री रहेकी छिन । फिल्ममा कथा तथा कोरियोग्राफीमा गम्भीर बिस्ट, द्वन्दमा चन्द्र पन्त, संगीतमा सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, किरण कडेल, राजन इशान र सन्तोष श्रेष्ठ रहेका छन् ।
लभ म्यारिज पछी पहिलो पटक एउटै फिल्म खेल्दै निखिल र सञ्चिता, दर्शकले रुचाउछन् त फेरी पनि यो जोडीलाई ?
फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ को नयाँ गीत ‘साँझ पर्यो’ (भिडियोसहित)
नेपालका ११ शहरमा ‘बोबी’ कन्सर्ट हुने ! तपाइको ठाउँमा कहिले ?
‘अनुराग’सँग धमला पत्नी एलिजाको रोमान्स रिलिज (भिडियो)
सेलिब्रेटी किड्स शक्ति र कबिताको जोडी कस्तो देखियो ? (फोटो सहित)